>MoeMaKa and Friends raised and donated US$ 1280 for Political Activsits &amp; Families
>Cartoon Maung Yit - We are broken-hearted voters of 1990 Election. What NEXT ? 2010 !!!
>Zarganar and Zaw Thet Htwe appeared at court inside Insein Jail
တင်လတ်ကို ● တချောင်းမြင် (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၉ နှစ်ချောင်းမြင်နဲ့ တချောင်းမြင်က ညီအကို။ နှစ်ချောင်းမြင်က နှစ်ချောင်းမြင်ပြီး တချောင်းမြင်က တချောင်းပဲမြင်လို့ တချောင်းမြင်လို့ ခေါ်တွင်ကျတယ်။ တချောင်းမြင်က သူ့အကိုလို မဟုတ်ဘူး...
မောင်ကြူးရင့် ● ကြယ်ဝင်စား (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၉ ကြယ်ကြွေပြီ ကဗျာဆရာညွန့်သစ် ကြွေပြီ။ တနေ့ တို့လည်း ကြွေရဦးမှာပဲ သူ့ရိုးဂုဏ်နဲ့ စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းကို လောကတိုင်ထိပ်မှာ ချိတ်ထားခဲ့တယ် မောင်ကြူးရင့် ၂၁၊...
ဆောင်းဝေ (နတ်မောက်) ● မြေအောက်ရထားသံလမ်း (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၉ နိုင်ငံနဲ့ဘာသာစကားမတူသော်လည်း ကိုယ်သောက်မယ့်ကော်ဖီကို ကိုယ်တိုင်ဖျော်ပြီး ယူဆောင်လာကြဖို့ပါ မြို့ရဲ့နေရာအနှံ့အပြားမှာ ပတ်ခွေရောက်ရှိနေတာမို့ ခရီးကရှည်လျားပါတယ် တချိုနေရာတွေမှာ မဲမှောင်ပိတ်လှောင်နေပြီး နေရာအချိုမှာတေ့ာ မီးလုံးလေးတွေထွန်းညှိထားပါတယ်...
အောင်ဝေး – ချ စ် လို့ရေးတဲ့ က ဗျာ( ၂ ၇ )
Than Htay Maung အောင်ဝေး – ချ စ် လို့ရေးတဲ့ က ဗျာ( ၂ ၇ )...
ဗန်းမော်ညိုနွဲ့ – “အမေ့ဘဝ ငွေလမင်း” (မိုးမခပြန်လည်ဆန်းသစ်) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၉ သည်လောကသည် တက်ချီကျချည် ၊ စက်ဝန်းလည်မြဲ သည်စက်ဝန်းသွား ၊ မောင်းလက်ကြား၌ ဓားသွားမငြိ ၊ အထိမခံ အမှန်ဖက်နေ...
Page4of 952«1...23456...952»